Okwu Mmalite na ubchọpụta nsogbu nke agụụ Supercharger
Ihe dị iche n’etiti nnukwu ihe na-ehichapụ agụụ na nke agụụ na-ehichapụ na agụụ na-adị n’agbata breeki breeki na breeki nna ya ukwu, nke ejiri mee ka onye ọkwọ ụgbọ na-arịgo onye isi ya; mgbe agụụ supercharger dị na pipeline ...
Workingkpụrụ Ọrụ nke Nkwado Ike Breeki
Agụụ agụụ na-eji ụkpụrụ nke inu ikuku mgbe injin ya na-arụ ọrụ, nke na -emepụta agụụ n'akụkụ nke mbụ nke booster. Na nzaghachi maka nrụgide dị iche nke nrụgide ikuku nkịtị n'akụkụ nke ọzọ, a na-eji nrụgide dị iche mee ka nrụgide braking sikwuo ike. Ọ bụrụ ...
Hangzhou TieLiu agụụ booster Manufacturing Co., Ltd.
Hangzhou TieLiu agụụ Booster Manufacturing Co., Ltd, o nwere afọ 25 nke ogologo mmepụta ahụmahụ. Ya ụzọ bụ Hangzhou guxing Industrial Co., Ltd. The ụlọ ọrụ enwetara guxing na 2002 na tọrọ ntọala Hangzhou tieliu agụụ booster Manufacturing Co., Ltd. na May nke afọ ahụ, nke bụ nke t ...
Breeki Servo, Ike breeki Booster, Nchekwa onwe, Aftermarket breeki Booster, Agụụ breeki Booster, Booster Assy Brake,